लकडाउनको एक महिना : प्रदेश १ मा १५ करोडको तरकारी बारीमै कुहियाे, भारतबाट १५ करोडकै तरकारी आयात
यज्ञ अधिकारी/मोहन ढकाल
विराटनगर, ८ जेठ । लकडाउनको एक महिनामा प्रदेश एकमा १५ करोडको तरकारी नष्ट भइरहँदा भारतबाट चाहिँ सोही समयमा १५ करोडकै हाराहारीमा तरकारी आयात भएको छ ।
विराटनगर भन्सारबाट लकडाउनको पहिलो महिना चैतभरि भारतीय तरकारी भित्रिरहँदा प्रदेश १ का १० जिल्लाका सयौँ किसानको १५ करोड बराबरको तरकारी बिक्री नभएर खेतमै नष्ट भएको हो ।
कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगरका अनुसार प्रदेश नं १ का १० जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको काउली, बन्दा, टमाटर, साग, च्याउ, काँक्रा खोर्सानी, आलुलगायत ४ करोड ४० लाख ४९ हजार ७ सय ६६ मूल्य बराबरको तरकारी नष्ट भएको छ ।
एक महिनामा कुन–कुन तरकारी कति मूल्यको आयात भयो ?
विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट लकडाउनको पहिलो महिना चैतमा मात्र १५ करोड बराबरको हरियो तरकारी आयात भएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म ४ करोड ६३ लाख २१ हजार बराबरको १७ लाख २६ हजार ६ सय ७१ केजी आलु आयात भएको छ ।
यसैगरी २ करोड ७३ लाख ५८ हजार मूल्य बराबरको ६ लाख ९४ हजार ५ सय ९४ केजी प्याज आयात भएको छ । ७६ लाख ४० हजार रुपैयाँको ८४ हजार केजी लसुन आयात भएको छ ।
त्यसैगरी ५ करोड ३९ लाख ९४ हजार बराबरको ९ लाख ८४ हजार ९५ केजी हरियो तरकारीहरू आयात भएको छ । हरियो तरकारीहरूमा परवल, भिन्डी, करेला, खोर्सानी, बन्दालगायत छन् ।
कुन–कुन जिल्लामा कति मूल्यको तरकारी नष्ट ?
निर्देशनालयका अनुसार ताप्लेजुङमा १.७ मेट्रिक टन, पाँचथरमा ६, इलाममा २३.८३, झापामा २ हजार १ सय, मोरङमा २ हजार २ सय ५०, सुनसरीमा २ हजार ४ सय मेट्रिक टन तरकारी नष्ट भएको छ ।
त्यस्तै संखुवासभामा ९, भोजपुरमा ७.५, खोटाङमा १३.२८, उदयपुरमा २ सय मेट्रिक टन तरकारी नष्ट भएको छ । ताप्लेजुङमा ३६ हजार, पाँचथरमा १ लाख ८७ हजार, इलाममा ७ लाख ४१ हजार, ७ सय ६६, झापामा ४ करोड २० लाख, मोरङमा ४ करोड ५० लाख, सुनसरीमा ४ करोड ८० लाख बराबरको तरकारी नष्ट भएको छ ।
त्यस्तै संखुवासभामा ३ लाख ६० हजार, भोजपुरमा २ लाख ४५ हजार, खोटाङमा ४ लाख ८० हजार र उदयपुरमा ७० लाख बराबरको तरकारी नष्ट भएको छ ।